Atụmatụ Mmụta | Rekwụ Regwọ Ahụ | ,Hụnanya, Mmekọahụ na ịntanetị
Home Atụmatụ nkuzi nke ụlọ akwụkwọ n'efu
Na enweghị iwu nkwenye afọ na ihe egwu nke mkpọchi mkpọchi ebe ụmụaka ga-enwe ike ịnweta saịtị porn, Regwọ Ọrụ decidedgwọ kpebiri ime atụmatụ isi ihe asaa ya na ịntanetị na mmekọahụ maka free na anyị ahịa. Enwere obi ike banyere ịkụzi isiokwu a siri ike. Ndị nne na nna nwekwara ike iji nkuzi ndị a maka nkuzi ụlọ.
Uniquezọ anyị pụrụ iche na-elekwasị anya na nsonaazụ nke ịntanetị na ụbụrụ nwa. Collegelọ ọrụ Royal nke General Practitioners (ndị dọkịta ezinụlọ) kwadoro na ọrụ ebere ahụ na London dị ka nzukọ ọzụzụ a ma ama maka ịkụzi banyere mmetụta nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na ahụike na ahụike. N'ime afọ 8 gara aga Regwọ Ọrụ hasgwọ na-akụzi na ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ndị nweere onwe ha banyere mmetụta nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na ahụike na ahụ ike na ịge ntị n'ihe ụmụ akwụkwọ chọrọ ịmụta na mkparịta ụka. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha nwere mmasị na ịrụ ọrụ nke ụbụrụ ha na etu ọrụ ịntanetị ha nwere ike isi metụta ahụ ike ha, omume na mkpali ha. Anyị anọwokwa na-ege ntị n’ihe ndị nkụzi chọrọ iji obi ike na-akụzi okwu a na-ese okwu. Site na itinye uche na ahụmịhe sayensị na ahụmịhe nke ndụ, ndị nkuzi ga-anọ n'ọnọdụ dị mma iji nyere ụmụ akwụkwọ aka iche echiche banyere nsogbu ndị ha na-eche ihu na ịntanetị juputara na foto ndị gba ọtọ. Dị ka dibia na-agwọ ọrịa uche bụ Dr John Ratey si kwuo, “Ndụ gị na-agbanwe mgbe ị nwere ụbụrụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ na-eme ka obi amamịghe pụta ụwa mgbe ị matara na e nwere ihe ndị na-eme ka obi na-ajọ mmadụ njọ. ” (P6 Okwu Mmalite nke akwụkwọ "Ọkụ!").
Anyị arụ ọrụ site na enyemaka nke ọtụtụ ndị ọkachamara gụnyere ihe karịrị ndị nkuzi 20, ọtụtụ nwere ahụmịhe n'ịzụlite ihe ọzụzụ maka ụlọ akwụkwọ, ndị ọka iwu, ndị uwe ojii, ndị ntorobịa na ndị isi obodo, ndị dọkịta, ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ọtụtụ ndị nne na nna. Anyị emeela ihe nkuzi na ụlọ akwụkwọ na UK. Ihe ndị a dị iche iche dị iche iche na enweghị agụụ mmekọahụ.
Ihe omumu a gara nke oma. Mụ akwụkwọ na-arụ ọrụ zuru oke. Enwere ozi zuru oke na atụmatụ nkuzi iji mee ka ndị nkuzi chee na ha akwadebere. Ga-akuziri ya ọzọ.
Re: Sexting, the Law na You: Ọ nyere aka nke ukwuu. Akụkọ ndị ahụ na-amasị ha, ha kpalikwara ọtụtụ mkparịta ụka. Anyị tụlekwara iwu iwu nke a ga-atụle nke ọma. Saidmụ akwụkwọ kwuru na ha anabatabeghị aka na inweta ihe ọ bụla gbasara mmekọahụ / foto dịka “ọ na-eme oge niile”. Ha kwuru na ha leghaara ya anya n’ihi na ọ bụghị nnukwu nsogbu. Anyị chọpụtara na ọ bụ ihe ịtụnanya. (Site n'aka ndị nkuzi 3 nọ na St Augustine's RC School, Edinburgh.
"Ekwenyere m na ụmụ akwụkwọ anyị ga-enwe ebe nchekwa ebe ha nwere ike ịkọwa ọtụtụ nsogbu metụtara mmekọahụ, mmekọrịta na nnweta nke foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet." Liz Langley, Isi nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Onwe na Social, Dollar Academy
"Meri gwara ụmụ anyị okwu mara mma banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ: ọ dabara adaba, na-enweghị nkatọ ma na-enye nkọwa dị ukwuu, na-enyere aka ịkwadebe ụmụ akwụkwọ anyị ihe ọmụma ha chọrọ iji wee họrọ nhọrọ na ndụ ha.”Stefan J. Hargreaves, Master in Charge of Seminar, blọ akwụkwọ Tonbridge, Tonbridge
Ihe omumu a di ugbua dabara adaba maka ulo akwukwo nke okwukwe dika egosighi ihe nlere-anya na enwere ike idoghari ya na ntinye okwu ufodu nke akowara na Nkuzi Onye nkuzi. Maka nkọwa ndị ọzọ, biko kpọtụrụ Mary Sharpe na mary@rewardfoundation.org. Wardlọ Ọrụ wardlọ Ọrụ enyeghị ọgwụgwọ ma ọ bụ ndụmọdụ iwu.